अझै एक महिना नयाँ सरकार बन्दैन, झलनाथ खनालले गरे यस्ताे खुलासा! | Suvadin !
अझै एक महिना नयाँ सरकार बन्दैन, झलनाथ खनालले गरे यस्ताे खुलासा!
पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता झलनाथ खनालले माघभित्रै नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना नरहेकाे बताएका छन्। खनालले फागुनमा मात्रै वाम नेतृत्वको सरकार गठन हुने जनाएका हुन्।
Jan 16, 2018 11:25
पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता झलनाथ खनाल।
लमजुङ, २ माघ – पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता झलनाथ खनालले माघभित्रै नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना नरहेकाे बताएका छन्। खनालले फागुनमा मात्रै वाम नेतृत्वको सरकार गठन हुने जनाएका हुन्।
लमजुङकाे सदरमुकाम बेँसीशहरमा आयोजित घले ल्होसार कार्यक्रमलार्इ सम्बाेधन गर्दै खनालले फागुनको तेस्रो साताभित्र नयाँ सरकार गठन हुने प्रष्ट पारेका हुन्।
खनालले संविधानकै प्रावधानका कारण नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै सरकार गठनअघि एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता हुने खुलाशा गरेका छन्।